Xuutiyiinta Yemen oo sheegay inay diyaar u yihiin xabad joojin – Radio Daljir
Noofember 19, 2018 5:12 b 0
Mucaaradka hubaysan ee Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay diyaar u yihiin xabad joojin, lana joojiyo duqaymaha Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta ay ka wadaan wadanka Yemen.
Qoraal kasoo baxay kooxdan ayaa lagu sheegay inay diyaar u yihiin xabad joojin haddii isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ay doonayaan nabad.
Cadaadis caalami ah ayaa la saaray dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen, si loo joojiyo dagaalka Yemen ee ay ku geeriyoodeen toban kun oo ruux, sidoo kalena wadanka geliyay xaalad macluul iyo nafaqo darro ah.
Talaabada Xuutiyiinta ayaa imaanaysa, iyadoo isbahaysiga Sacuuiga laga dalbanay inuu joojinayo duqaymaha uu ku hayo magaalada dekedda leh ee Xudeyda, taasi oo ah barta uu ka socdo dagaalka ugu wayn ee uu hogaaminayo Sacuudiga.
“Kadib xiriirka uu nala soo sameeyey wakiilka gaarka ah ee QM ee kusaabsan joojinta gantaalada iyo diyaaradaha aan cidna wadin, waxaan ku dhawaaqaynaa inaan bilownay joojinta gantaalada iyo duqamaha xagga cirka ah ee sida gardarada ah nalagu hayo” ayuu yiri Maxamed Cali Al-Xuuti oo sidoo kalle ah madaxa guddiga kacdoonka ee Yemen.
QM ayaa rajaynaysa wada hadal dhaca kahor sanadkan intuu dhamaan oo dhinacyada khilaafka uu ka dhaxeeyo ee Yemen lagu soo afjarayo colaadda dowladda iyo mucaaradka, kaasi oo lagu wado inuu kadhaco wadanka Sweden kahor dhamaadka sanadka.